Ny fiheverana ny findainao aseho amin'ny sary sokitra | Famoronana an-tserasera
Tsy misy holazaina momba an'ity lohahevitra ity. Mila mijery fotsiny ny manodidina antsika isika rehefa midina amin'ny arabe amin'ny tanàna rehetra mba hanehoana ny haben'ny fiheverantsika antsika amin'ireo finday devoly ireo.
Ary io no hevitra ao ambadik'izany sary sokitra noforonin'ny artista anglisy iza no tsy te hiala amin'io faniriana io ho an'ny fitaovana iray saika hiantsoantsika avy any amin'ny helo na avy amin'ny devoly. Betsaka ny ora lany eo alohan'io efijery io izay nanokanan'i Gali May Lucas ny fotoany mazava tsara tamin'ity sary sokitra ity.
Sary sokitra mampiseho ho an'ny olona variana isan-karazany miaraka amin'ny efijery findain'izy ireo tanteraka. Ny olona navitrika fotsy ary, noho ny hazavana navoakan'ny sary sokitra finday, dia manome consonance bebe kokoa amin'ny tanjona notadiavin'i May Lucas.
Io dia niaraka tamin'ny mpanao sary sokitra Karoline Hinz izay namoronany andian'olona maromaro izay manazava ny tarehin'izy ireo amin'ny famirapiratana sy ny hazavana avy amin'ny efijery finday.
Nantsoina ny fametrahana zavakanto "Tototry ny mazava". Ny tanjon'ilay mpanakanto dia ny ahafahan'ny olona misolo tena an'io sary sokitra io. Ary io sary sy sary io dia hita amin'ny zorony rehetra, arabe, zorony na habakabaka amin'ireo tanàna sy tanàna eto amin'ity firenena ity sy ny maro hafa.
Andao lazaina izao fa tsy misy afaka mizara ireo fotoana ireo ao amin'ny ascenseur miaraka amina olona hafa raha mbola eny am-pelatananao ny findainao vaovao ahafahanao mijery ireo tambajotran-tseraseranao, valio ilay hafatra miverimberina avy amin'ny namanao na jereo ny vaovao isan'andro miverimberina isan'andro.
Efa nanana izahay Sergio Ingravalle mampiseho ny fomba fijeriny manokana izany fiainana nomerika izay anesorana antsika isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mampiseho ny fitaintainantsika amin'ny mobiles amin'ny sary vongana